Pakistan: Cudurka sheegitaankiisa laga xishoodo ee sida ba’an u laaya dumarka - Latest News Updates
Pakistan: Cudurka sheegitaankiisa laga xishoodo ee sida ba’an u laaya dumarka
Pakistan ayaa ah waddanka uu saameynta ugu badan ku yeesho kansarka naasaha, marka loo eego guud ahaan dalalka qaaradda Aasiya. In xilli hore la ogaado cudurkan waa arrin muhiim ah laakiin khubarada caafimaadka waxay ka cabsi qabaan in haween badan aysan xanuunka ka haya naasaha usoo bandhigin sababo la xiriira dhaqanka xishoodka ku saleysan.
Kansarka Naasaha wuxuu sanad walba dalka Pakistan ku dilaa 17,000 oo haween ah, sida laga soo xigtay hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, inkastoo ururrada samafalka ee arrintan u kuur gala iyo dhakhaatiirta waddankaas ay sheegayaan in tirada dumarka uu cudurkaas noloshooda galaafto sanad walba ay gaareyso 40,000.
Waxay sheegeen in cudurkan uu ku dhaco hal ka mid ah sagaalkii dumar ah ee ku nool waddankaas, hase yeeshee xishoodka dhinaca dhaqanka uu aad u adkeeyo in haweenku ay helaan caawinaad noloshooda lagu badbaadin karo.
“Kansarka Naasaha wuxuu ku lug leeyahay xubnaha dumarnimada ee sheegitaankooda afka xitaa lagala xishoodo dalka Pakistan”, sidaas waxaa yiri Cumar Aftab oo ka tirsan hay’ad ka shaqeysa arrimaha kansarka naasaha, oo lagu magacaabo Pink Ribbon Foundation.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaas ku daray: “Intii loo arki lahaa inuu yahay cudur, waxaa loo arkayaa arrin la xiriirta xubnaha dumarnimada”.
Dadka ka badbaaday cudurkan ayaa sheegay inay “si kalinnimo ah” u wajaheen.
‘Qoyskeyga ayaan mudnaanta koowaad siiyaa’
Macallimadda wax ka dhigta dugsiga hoose dhexe ee lagu magacaabo Silvat Zafar waxay ahayd dhowr iyo labaatan jir markii ay buro yar ku aragtay naaskeeda.
Waxay go’aansatay inay ka qariso qoyskeeda, kuwaasoo markaas isku diyaarinayay safar dalxiis ah oo ay Mareykanka ugu socdeen.
“Bulshadeenna waxaa caado u ah in gabdhuhu ay qarsadaan arrimaha khaas u ah ee la xidhiidha jidhkooda”, ayey tidhi.
“Maba ka hadli kartid wax noocaas oo kale ah. Aniga afkeyga masoo qaban karin inaan dhaho ‘kansarka naasaha’. Hooyadey way geeriyootay waxayna ahayd qofka kaliya ee dumar ka ah qoyska, marka aniga la iga soo tago, sidaas darteed waan iska aamusay”.
Intii lagu guda jiray safarka dalxiiska ah, Silvat way qarineysay burada naaska uga taallay, iyadoo xiraneysay dhar waaweyn, sidoo kalena ma aysan ka hadleynin xanuunka daran ee ay dareemeysay.
Markii ugu horreysay ee ay caawinaad heshay lix bilood ka dib, xanuunkeeda kansarka naasaha wuxuu marayay heerka saddexaad, taasoo micnaheedu yahay in burada ay weynaatay ayna halis ugu jirtay in cudurku uu kusii fido jirkeeda intiisa kale.
Laakiin iyadoo xitaa heerkan khatarta badan joogtay, daaweyntu wali wax way u tari kartay.
Xaaladda Silvat mid qeyrul caadi ah kuma aysan ahayn Dr Huma Majeed, oo ka mid ah dhakhaatiirta qalliinka kansarka naasaha ee ugu waaweyn dalka Pakistan. Waxay leedahay xarun caafimaad oo ku taalla magaalada Lahore, halkaasoo ay ku daweyso boqollaal haween ah oo qaba kansarka naasaha.
“Dumarku naftooda mudnaanta koowaad ma siiyaan marka ay ka fikirayaan qoyska”, ayey tidhi.
In “laga xishoodo” sheegitaanka kansarka naasaha waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dumarka reer Pakistan ka hor istaaga in lagu caawiyo daweynta.
Haween badan, iyo xitaa ragga ay xaasaska u yihiin raalli kama aha in ay baaritaan ku sameeyaan dhakhaatiir rag ah, maadaama meesha la baarayo ay tahay xubin muhiim u ah astaamaha dumarnimada.
Balse waxay Dr Majeed sheegeysaa sababo kale oo sidoo kale caqabad ku ah daweynta dumarka qaba xanuunkaas.
“Waddan ay maamulkiisa dhaqaalaha iyo hoggaanka qoyskaba hayaan rag oo kaliya, sida Pakistan, qorshaha laguma daro daweynta dumarka”, ayey tiri Dr Majeed.
Waxaa kale oo ay sheegtay inay saameyneyso dhaqaale xumada ka jirta dalkaas.
Sobia, oo 20 jir ah, waxay mareysaa baaritaankeedii ugu horreeyay ee lagu sameayo tan iyo markii ay Dr Majeed qalliin uga goysay buro ay ku aragtay naaskeeda.
Gabadhan waxay waxbarashadeeda u deysay si ay u shaqeyso ayna u caawiso walaalaheeda kale.
Maanta waxay labo saacadood iyo bar u soo safartay si baaritaankaas muhiimka ah loogu sameeyo.
“Waa arrin xasaasi ah, meeshan waa xubin khaas ah oo ka mid ah jirka haweenka, ugama hadli kartid dadka hortooda”, ayey tiri Sobia.
Bisha October waxaa adduunka oo dhan laga sameeyaa wacyigalinta ku saabsan kansarka naasaha, gudaha dalka Pakistan-na hay’adaha samafalka, sida Pink Ribbon Foundation, waxay ku mashquulsan yihiin ol’olaha noocaas ah.
Hay;addan samafalka ah waxaa la aasaasay 15 sano ka hor, dhawaan unbayna shaaca ka qaadday in xishoodka uu sabab weyn u yahay kansarka naasaha ee saameynta ba’an ku yeeshay dumarka Pakistan.
Ol’olihii ugu dambeeyay ee ay sameeyeen waxaa lagu bartilmaameedsanayay haweenka da’ yarta ah.
Waxay booqdeen ilaa 200 oo isugu jira jaamacado iyo mac-hadyo.
Waxaa hadda socda qorshe lagu doonayo in isbitaal weyn oo kansarka naasaha ah laga dhiso magaalada Lahore.
Dowladda ayaa dooneysa in xaruntaas loo sameeyo shaqaale caafimaad oo kalabar ka mid ah ay yihiin dumar, si loogu dhiirrigaliyo haweenka inaysan xanuunkooda la xishoonin.
Waxaa la rajeynayaa in xaruntaas albaabbada loo furo sanadka soo socda ee 2020-ka.
Dr Majeed waxay sheegeysaa in dadaallada la sameynayo ay xitaa qeyb ka tahay sidii ragga loogu tababari lahaa arrintan, isla markaana ay u fahmi lahaayeen muhiimadda ay leedahay in xanuunkan la daaweeyo xilli hore.
Laakiin ma sahlana in isbaddal dhakhso ah la sameeyo.
Silvat Zafar waxay rajeyneysaa in soo bandhigista sheekadeeda ay dumar badan ka caawineyso inay bannaanka soo dhigaan xanuunkooda kansarka naasaha, ka hor inta aysan xaaladdu faraha ka bixin.
“Wax weyn ayaad u tari kartaa naftaada, ha baqin, soo istaag oo guuleyso”, ayey tidhi.